Manjaro pane inoramba iri USB, saka unogona kuiwana | Linux Vakapindwa muropa
Linux ndiyo kernel iyo Linus Torvalds yakagadzira kwemakumi emakore uye pane ayo mazana masisitimu anoshanda akavakirwa. Pakati pesarudzo dzakawanda, chinhu chine musoro ndechekuti yega yega ine chaanofarira kugovera, senge Kubuntu kwandiri, Fedora kune vamwe kana Arch Linux yevamwe. Asi chinhu chakanaka ndechekuti isu tinogona kushandisa kumwe kugovera pasina kubata chero chinhu chatakaisa, uye muchinyorwa chino tiri kuzokuratidza nzira yakanaka yekuisa Manjaro pane USB ine kuramba uchichengeta.
Kuti uite zvakafanana nekuparadzirwa kwakadai seUbuntu, iwe unofanirwa kuita nhanho dzakasiyana dzakasiyana idzo dzimwe nguva dzinotitungamira kuti tigadzire Live USB umo shanduko dzichachengetedzwa, asi Manjaro yaita chimwe chinhu chakasiyana kwazvo: kuvhura chakakosha mufananidzo kwatiri kuti tirase pane pendrive. Matanho acho ari nyore, asi ramba uchifunga kuti, zvirinani panguva yekunyora chinyorwa ichi, izvo zviripo ndeye XFCE vhezheni chete.
Maitiro ekuisa Manjaro XFCE pane pendrive
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kurodha pasi xfce-usb mufananidzo, yazvino vhezheni yacho iri mu Iyi link. Kana iwe ukaverenga chinyorwa ichi mushure memwedzi mishoma, enda ku iyi imwe link; ndinovimba, pamusoro peiyo XFCE vhezheni ivo zvakare vakagadzira iyo KDE neGNOME mifananidzo.
Iye zvino isu tinofanirwa kurasa iwo mufananidzo pane iyo pendrive. Izvi zvinogona kuitwa nenzira dzakasiyana. Manjaro anokurudzira Etcher, asi ndakazviita neiyo "dd" nzira, sekutsanangura kwatingaita kurasa zvifananidzo zvePineTab pano.
Kana kamwe mufananidzo wacho waiswa kune iyo pendrive, isu tinogona kuushandisa pane chero komputa, chimwe chinhu chatinogona kuita zvakananga kutarisa kuti zvese zvafamba mushe. Iro zita rekushandisa ndi "manjaro" uye password ndeye "manjaro", ese ari maviri asina makotesheni. Kugona kushandisa Manjaro kubva paUSB, unofanirwa kutanga kubva pairi, uye nzira yekuzviita inoenderana nekombuta. Mimwe bhutsu yakananga kubva kuUSB drive, uye imwe inoda kuti hunhu ugadziriswe.
Iwe unozoona kuti iro rakaomarara diski rine chete 8GB, kunyangwe yako pendrive iri yehukuru hukuru. Zvatinofanirwa kuita kuwedzera saizi ndeye kudzosera iyo pendrive mukombuta yeLinux, shandisa GParted kana chishandiso chakafanana, sarudza dhiraivha uye uiwedzere. Zvakareruka sekudaro.
Kana isu tichida kushandisa imwe graphical nharaunda, senge Plasma, tinogona kuiisa kubva pamac (iyo app ine GUI) uye wosarudza iyo kubva iko kupinda. Ndiri kuishandisa muLenovo ine i3 processor uye 4GB ye RAM pandakasiya Windows uye ndinogona kungoti izvozvi ndichaishandisa zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuisa Manjaro pane USB ine anoramba achichengetedza
Kugona!! Ndinoda kuziva kana mushure mekugadzira live usb ini ndinogona kuenderera ndichishandisa iyo pendrive yekuchengetedza zvinhu. Ndokunge, kana ndikangoponesa iso HANDINGAZokwanisa kuishandisa kusevha mafirimu nemafaira, nezvimwe.
Ini ndinogona kuve neanoverengeka linux anorarama ISOs pane pendrive?
Tenga hukuru hukuru usb uye uve nezvose zviripo (iso linux live, mimhanzi, mafirimu, nezvimwewo), kana uine angangoita maviri (mune imwe iyo linux inorarama uye mune mamwe mafaera akati wandei)?
Izvi zvinogadzira HAPANA LIVE mufananidzo, asi 99% yakakwana. Mushandisi ndiye manjaro uye pasiwedhi ndiyo manjaro, asi kune zvese zvimwe zviri zvakafanana nekunge iwe wakariisa pane rakaomarara diski. Mufananidzo wacho une mashoma magig, ini ndinofunga zvakajairwa 4, uye iwe unogona kuushandura. Saka, semuenzaniso, kana iwe uine 32gb flash drive, iwe unofanirwa kugona kushandisa makumi maviri neshanu kana iwe uchimomesa kupatsanura, asi chimwe chinhu chandisina kutarisa.